LATEST : Mnangagwa poisoning saga spills into politburo – Report Focus News
LATEST : Mnangagwa poisoning saga spills into politburo
The explosive indaba comes amid widening succession fissures. The meeting, according to Zanu-PF sources, is also likely to recommend disciplinary action against Mnangagwa’s allies, accused of fanning reports that the Vice-President fell sick after consuming ice-cream supplied by President Robert Mugabe’s Gushungo Dairies.
Zanu-PF secretary for administration Ignatius Chombo yesterday confirmed today’s meeting, but as has become the norm, declined to disclose issues likely to be discussed.
At the last politburo meeting, Mnangagwa sought to rebutt Moyo’s report and would likely bring evidence that the Higher Education minister was working to destroy Zanu-PF from within.
Mnangagwa was, three weeks ago, airlifted from a Zanu-PF campaign rally in Gwanda and taken to South Africa for treatment following the poisoning scare, but Mugabe last week disclosed that his deputy’s doctors had ruled out food poisoning.
The politburo is also expected to deliberate on preparations for Zanu-PF’s December conference, next year’s elections, as well as support for agriculture under its ambitious command agriculture scheme led by Mnangagwa.